AT & T uye Linux Foundation Joinha Mauto eAkraino Project | Linux Vakapindwa muropa
AT & T, iyo American telecommunications hofori iyo yakatisiyira mipiro mikuru kune nyika yehunyanzvi kubva kune yayo inozivikanwa Bell Labs, senge mipiro yakakosha kune yakasimba state elektroniki, iyo C programming mutauro uye iyo Unix inoshanda system, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda, Zvino anounza mufaro kunharaunda yakavhurika sosi zvakare nemupiro mukuru kuLinux Foundation. Uku kubatana kwakatungamira kuchirongwa chitsva chinonzi Akraino.
Iyo Linux Foundation yanga yakabatikana zvikuru kugadzira chirongwa chekubatanidza network pasi peimwe amburera inonzi LF Networking, uye kuti iwedzere kukura ikozvino kunouya chirongwa chitsva cheAkraino, kodhi yayo yaizotanga kubva AT & T, kunyanya nezveEdge gore zvigadzirwa zveiyi kambani yengano. Iyo projekiti ine simba kwazvo iyo ichave ikozvino iri pasi pekudzidzisa kweiyo Linux Foundation.
Edge yakagadzirirwa kuti inyanye kubatsira pakuitwa kweiyo Indaneti yezvinhu kana IoTUnobudirira zvakadii izvozvi uye kuwanda kweiko kwauri kuwana. Zvakare nekuziviswa muchirevo, iyo nyowani Akraino chirongwa chichaunza kuyedza kukuru kunoitwa neAT&T Izvi zvakataurwa naJIm Zemlin, Executive Director weLinux Foundation. «Akraino Edge CLoud inozadzisa LF Networking mapurojekiti senge ONAP mukupedzisira-kumagumo sevhisi otomatiki. ». Naizvozvo ndicho chidimbu chisipo ...
Rangarira izvozvo ONAP (Open Network Automation Project) yaive chirongwa chakatangwa mu2017 uye kusangana kwayo kunouya kubva kunetiweki otomatiki mapurojekiti akaitwa neAT&T, China Mobile uye ECOMP. Nezve iyo technical technical ye akraino, panguva iyo ivo vashoma, iyo webhusaiti haina kupa zvakawanda zvakawanda izvozvi, saka isu tichafanirwa kumirira. Asi zvinonyatso batsira pamwe ne ONAP uye OpenStack kugadzira ramangwana network-based inotevera-chizvarwa masevhisi emangwana 5G IoT mapurojekiti uye zvimwe zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AT & T neLinux Foundation vanobatana nemauto eprojekti yeAkraino